Thursday June 11, 2020 - 09:26:15 in Wararka by Liibaan Jeexoow
R/wasaaraha xabashida abiy Axmed ayaa magaalada Addis Ababa ka sheegay in dowladiisu aysan marnaba gorgortan ka geli doonin arrinta biya xireenka nahda ee laga dhisayo halka uu kasoo burqado wabiga Niil.
Abiy Axmed oo khudbad ujeedinayay baarlamaanka wadankiisa oo kalfadhiga uga furmay magaalada Addis Abab ayaa ku dheeraaday ka hadalka amniga qowmiga ah ee wadankaas wuxuuna kusoo daray dhismaha biya xirenka alnahda oo uu sheegay in uu muhiim u yahay qof walba oo itoobiyaan ah.
wuxuu adeegsaday lahjado kul kulul oo ka dhan ah dowladaha Masar iyo Suudaan oo murun ku aaddan qeybsiga biyaha Wabiga Niil uu itobiya kala dhaxeeyo, Abiy Axmed oo muuqday in uu laalay dhammaan heshiisyadii horay udhaxmaray dowladaha sedax geesoodka ah ayaa shacabkiisa ugu bishaareeyay bilaabidda buuxinta waaskooyinka.
Dhismaha biya xireenkan ayay dowladda Itoobiya bilaawday sanaddii 2011 waxaana xiligaas dhagax dhigay R/wasaarihii halaagsamay ee Males zanaawi, biya xireenkan ayaa ah midka koowaad ee ugu weyn qaaradda afrika iyo midka 10aad ee caalamka ugu weyn jooggiisu waa 145 mitir.
dherirkiisu waa 1800 mitir wuxuu qaadaa biyo dhan 74 milyaar Mitir kiyuubig wuxuu soo saari doonaa15 cutub koronto ah oo halkii cutub uu bixinayo dab dhan 350 megawaat.
Hoos ka daawo kalimadda Abiy Axmed